နောက်ထပ် Product ထွက်လာဖို့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ နေခြည်ဦး
နေခြည်ဦးက သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ပိုင် Brand လေးဖြစ်တဲ့ YOUR SOCIAL MEDIA BFF Planer စာအုပ်လေးကို အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကြောင့် ပီတိတွေ ဝေနေရပါတယ်. နောက်ထက် Product ထပ်ထုတ်သွားဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်.
နေခြည်ဦးရဲ့ YOUR SOCIAL MEDIA BFF Planer စာအုပ်လေးကတော့ လက်ရှိမှာ Preoder မှာထားတဲ့ ပရိသတ်တချို့လက်ထဲကို ရောက်ရှိလို့ နေပါပြီ. ဒီ့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက အရမ်းကို သဘောကျနေတဲ့အကြောင်းတွေ ပြောလာတဲ့အခါမှာတော့ နေခြည်ဦးတစ်ယောက် ပီတိဖြစ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်.
''ပီတိကိုစား အားရှိရပါတယ်။၂၀၁၉ အတွက် ready ဘဲဆိုတဲ့ Chillies တွေမြင်ရတော့ နောက် product ထပ်လုပ်ဖို့လဲ ကိုယ်အဆင်သင့်ပါ။ ၂၀၁၉ တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာ သင်နဲ့အမြဲအတူရှိနေမယ့် YOUR SOCIAL MEDIA BFF ဒီနေ့ preorder သမားတွေအတွက် စဝေပါပြီနော်။ မမှာလိုက်ရလို့ ဝယ်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ေ နာက်အပါတ်ဆို သိရပြီနော်'' ဆိုပြီးတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်.
"Your Social Media BFF" ဆိုတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် စာအုပ် လေးရဲ့ အောင်မြင်မှုကတော့ တကယ်ကို အမိုက်စားပါ။ ပထမဆုံးနေ့မှာတင် Pre Order ၃၀၀၀ ကျော် ရောင်းအား ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို နေခြည်ဦးကိုယ်တိုင်က ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရင်း Duwun media ရဲ့ သီးသန့် အင်တာဗျူးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။
'' ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ Pre Order ၃၀၀၀ လောက် ရောင်းရတယ် ဆိုတော့ တော်တော်လေး ရောင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့ နော်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီစာအုပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်နေ့မှ ရောင်းမှာလေ။ Pre Order မှာ ဈေးလည်း ၂၀၀၀ လျှော့ထားတယ်။ ဒီ့အတွက် ကံစမ်းမဲတွေ Promotion တွေလည်း ရှိဦးမှာဆိုတော့ Pre Order မှာ သေချာလေး Save ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်'' လို့ ဆိုပါတယ်။
နေခြည်ဦးက "Your Social Media BFF" ဆိုတဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန် စာအုပ်လေး Pre Order မှာတော့ ဈေးနှုန်း ၅၅၀၀ ကျပ်နဲ့သာ ရောင်း ချနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ဆိုရင် ပရိသတ်တွေဆီ အရောက်ပို့ဆောင်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Pre Order ရက်ကျော်သွားရင်တော့ ၁၇၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းချသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
''၁၇၅၀၀ ဆိုတာ တော်တော်လေးများနေပါပြီ။ အဓိက ကတော့ နေခြည့်ပရိသတ်တွေက ပိုဝယ်တာပေါ့နော်။ နောက်ဆိုရင် ချီလီကြောင့် ဝယ် တာမဟုတ်ဘူး၊ နေခြည်ဦးကြောင့် ဝယ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီ Brand သည် တကယ်ကို အသုံးဝင်တဲ့ ပုံစံမျိုးလေး သွားချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံးမှာလည်း ဒီဈေးနဲ့ပဲ သွားသလို နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီလောက် ပဲ သွားမှာပါ'' လို့ ဆက်လက်ပြောပြလာပါတယ်။
နေခြည်ဦးကို ပရိသတ်တွေက Beauty Blogger တစ်ဦးအနေနဲ့ စတင်အားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အောင်မြင်တဲ့ Beauty Blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့သာမက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လာတာတွေကို မြင်တွေ့ရပါတယ်။ သူပါဝင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေကလည်း ပရိသတ်အရှေ့ကို မကြာခင်ရောက်ရှိ လာတော့မှာပါ။